साबधान ! ‘पन्डस’ क्रिम महिलाहरूको लागि पो’इजनिङ , अमेरिकाले प्रमाणित गर्यो यस्तो तथ्य ….
अमेरिकामा पहिलोपटक एक महिलालाई गोरो हुने क्रिमका कारण ‘मर्करी पो’इजनिङ’ भएको छ । क्यालिफोर्नियास्थित ती महिलाले विगत् सात वर्षदेखि ‘पन्डस’ कम्पनीको एउटै क्रिम लगाइरहेकी थिइन् जसले नै उनको छालामा पो’इजनिङ गराएको अमेरिकाको रो’ग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले रिपोर्ट गरेको छ ।
४७ वर्षीया ती महिला गत जुलाईमा जीउमा घो’चेको जस्तो र पाखुरा हातहरु क’मजोर भएको भन्दै डाक्टरकहाँ पुगेकी थिइन् । त्यसको दुई हप्तापछि नै फेरि उनी आखाँले सबै धमिलो देखिरहेको र बोल्नमा पनि क’ठिनाइ भएको स’मस्या लिएर पुनः अस्पताल फर्किएकी हुन् । अस्पतालका अनुसार उनको अवस्था लगातार क’मजोर र अस्वस्थ भइरहेको थियो ।
यसबीच परीक्षणका क्रममा उनको शरीरमा असाधारण रुपमा अति उच्च मात्रामा ‘मिथायल म’र्करी’ रहेको पत्ता लागेको हो । मिथायल म’र्करी अत्यन्तै वि’षाक्त तत्व मानिन्छ जसले हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई दिर्गकालीन रुपमा ग’म्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ । सिडिसीको रिपोर्टमा पनि उनलाई पुगेको नो’क्सानले स्थायी रुप लिने सम्भावना बढी रहेको जनाएको छ ।
उनको परिवारले स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग बताए अनुसार उनले पछिल्लो सात वर्षदेखि मेक्सिकोबाट एउटा क्रिम मंगाएर दैनिक दुईपटक लगाउने गरेकी छन् । ‘पन्डस रेज्युभेनेस’ नामक सो क्रिममा नै निर्माण प्रक्रियाका क्रममा अधिक मर्करी मिसावट भएको बताइएको छ । चाउरीपन र अनुहारका दा’गहरु ह’टाउन उनलाई साथीहरुले सो क्रिम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अधिकारीहरुका अनुसार त्यसमा प्रति १२ हजार पार्टमा १० लाख बराबर अर्थात १.२ प्रतिशत मिथायलम’र्करी मिसाइएको थियो । अमेरिकामा १ पार्ट प्रति १० लाख भन्दा धेरै म’र्करीयुक्त क्रिम का’नुनी रुपमा नि’षेध गरिएको छ ।
उनका अनुसार मिथाइल म’र्करीले हाम्रो स्नायु प्रणालीमा पुर्याउने क्षति त्यस प्रकारका मिसावट गरिएका उत्पादनको प्रयोग बन्द’ गरेपछि अझ बढी हुने गर्दछ । यसरी ती महिलाको पि’शाबमार्फत शरीरबाट म’र्करी ‘फ्लस आ’उट’ गर्न थेरापी गरिएपनि स्वास्थ्यमा सुधार आउन नसकेको बताइएको छ ।
सिडीसीले दिएको थप जानकारी अनुसार बि’रामी अहिले बोल्न र खान नसक्ने अवस्थामा रहेकी छन् । पछिल्लो एक दशकमा क्यालिफोर्नियामा ६० भिन्दाभिन्दै म’र्करी पो’इजनिङका घ’टना फेला परेका छन् तर ती सबैमा धेरै कम वि’षाक्त म”र्करीको प्रयोग भएको क्यालिफोर्नियाको स्वास्थ्य विभागको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यसरी क्रिमहरुमा मिथायलम’र्करी हुनु अत्यन्तै असाधारण कुरा हो जुन प्रायः‘सेलफिस’ मा हुन्छ । स्वास्थ्यविद्हरुका अनुसार त्यस किसिमका क्रिमका बट्टामा कुनै लेबल हुँदैनन् र कतिपयमा त २१ प्रतिशतसम्म म’र्करी मिसाइएको पाइएको छ । यसमा विशेषगरी बालबालिकाहरु ग’म्भीर रुपमा प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ ।
उनीहरु त्यस्ता क्रिम प्रयोग गर्नेहरुको सम्पर्कमा आउँदा मात्र पनि पो’इजनिङको शि’कार हुन्छन् । यस्तोमा विज्ञहरुले कुनैपनि किसिमको क्रिम प्रयोग गर्दा तिनको लेबल राम्ररी हेर्न, नामचलेका रिटेलरबाट मात्र खरिद गर्न र बाहिरबाट मगाएमा पहिले परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । सीएनएन [यो समाचार स्वास्थ्य संग सम्बन्धित भएका कारण साभार गरिएको हो ]